Watercolour tatoazy - Tataon'ny totozy rano tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Watercolour Tattoo Design Ideas ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Janoary 3, 2017
Ny dikan'ny tatoazy akoholahy
Toy ny hatsaran-tarehy manintona, ireo endrika ireo dia mampiseho ny dikany izay mitovy fatratra ihany koa. Ny tatoazy dia mety ho mariky ny fahatsiarovana, ny fisainan'ny finoany, ny fanehoam-pitiavana an'ireo izay nandalo na endrika endrika fotsiny. Ny ankamaroan'ny endrika tatoazy momba ny rano dia ny an'ny vorona sy ny bibikely.
Ireo tatoazy miteraka tononkalo mampiseho ny fiainana, ny fanantenana, ny metamorphose ary ny fahaterahana indray dia matetika ampiasaina. Tafio-trondro toy ny raozy mampiseho fitiavana sy hatsaran-tarehy, fa ny lotus dia maneho fahadiovana. Ny iray amin'ireo tatoazy marefo indrindra dia ny fofom-balsama nipoohin'ny rivotra, izay maneho ny famelana ny fahantrana sy ny fahafahana.
Zavamaniry mahazatra sy mahavariana ny tatoazy. Ny fotsifotsy sy ny famafazana loko dia maneho ny fahatsapana, ny eritreritra na ny heviny. Ny dikan'ny hevitra samihafa dia samy hafa amin'ny fomba fijerin'ny mpijery.
Tolo-tatoazy ho an'ny vehivavy
Ravinaratra ho an'ny zazavavy
Ny loko miloko rano dia mamerina tatoazy ho an'ny zazavavy
Totozy tànan-tànana ho an'ny zazavavy - Part 1
Totozy tànana tànana ho an'ny zazavavy - Part 2
Totozy fanosotra rano ho an'ny vehivavy
Tatoazy ho an'ny ankizivavy momba ny rano
Ny loko miloko miverina ny tattoos ho an'ny zazavavy
Totozy miloko akorandriaka ho an'ny zazavavy
Totozy miloko manga ho an'ny zazavavy
Totozy miloko miloko miloko manga ho an'ny zazavavy
Totozy ho an'ny vehivavy
Tolo-tatoazy ho an'ny lehilahy
Totozy rongony ho an'ny lehilahy
Totozy miloko fanakona rano ho an'ny lehilahy
Tato ho an'ny lehilahy amin'ny totozy rano
Tetezo trondro akorandriaka amin'ny lehilahy
Manao tatoazy ho an'ny lehilahy
Fametrahana tapa-tavoahangy misy rano
Toerana fametrahana ny fandroana rano tombokavatsa dia zava-dehibe toy ny fisafidianana ny endrika tsara. Ny toerana misy tatoazy dia miankina amin'ny haben'ny tatoazy. Ny tattoos lehibe kokoa dia tsara ery rehefa mipetraka any amin'ny faritra lehibe kokoa toy ny aoriana, kibo, kibay, tongotra sy soroka, fa ny tatoazy kely kokoa dia tsara ho an'ny faritra kely toy ny kitrokely, teboka, valala, ratra ny sofina ary eny amin'ny rantsantanana.
Ny olona sasany dia manana fepetra ara-tsosialy sy matihanina amin'ny fisoratana anarana. Ho an'ny ankamaroan'ny olona amin'io karazana io, ny tattoos amin'ny toerana izay mora rakotra dia tsara toy ny torso, hip area.
Ny tatoazy momba ny rano dia voadona haingana raha toa ka tsy voakarakara tsara. Midika izany fa ny fiarovana azy amin'ny tara-pahazavana sy ny fanamafisana ny fifandraisana raha ilaina dia zava-dehibe. Ny tatoazy momba ny rano dia mijery tsara kokoa amin'ny hoditra maivana satria mihamazava kokoa hatrany amin'ny endriky tattooing ny endriny tato anaty tatoazy. Ny tsara indrindra dia ny mifidy faritra iray tsy misy na voatokana ho an'ny tatoazy.
Fanomanana fiomanana amin'ny fanaovana tatoazy
Vitsy ny zavatra tokony hotsaroana alohan'ny hahazoana tatoazy:
Mba hihinana sakafo mahasalama alohan'ny hanaovana tatoazy toy ny vatana dia mila angovo mba hanasitranana ny fahasimban'ny tatoazy ary koa ny hisorohana ny hanoanana raha toa ka ela ny tati-basy. Tohizo ny herinao mandritra ny fotoana rehetra.
Mitafy akanjo izay mendrika ny hanala na hampiakarana miankina amin'ny faritra hanaovana tatoazy.
Miomana amin'ny zava-dehibe rehetra manaraka ny ilàna tati-bidy toy ny fanafody antibacterial na gaze. Tsara kokoa ny manontany ny mazoto tatoazy momba ireo zavatra ilaina rehetra hividianana azy.
Karazana tatoazy momba ny rano
Ny totozy momba ny rôbôlôsy dia endrika isan-karazany tatoazy vita amin'ny tapa-damba sy ny loko. Ny endrika mampiavaka ny loko ampiasain'ny olona dia tena mahafinaritra. Miaraka amin'ny karazan-karazan-javatra maro samihafa, dia sarotra ny famaritana ny fanoratana. Ny karazana roa samy hafa dia sokajiana eo amin'ny taham-pamokarana mainty.
Watercolor Tattoos tsy misy fotony mainty -
Ny tatoazy momba ny rano tsy misy fotony dia aseho amin'ny endrika tatoazy tsy misy drafitra mainty na asa an-tsoratra. Ny famokarana tatoazy izay manintona kokoa ny sary hosodoko amin'ny rano. Ireo karazan-tatoazy ireo dia mampihena ny sisiny izay toa mitambatra amin'ny hoditra ary sarotra ny manavaka. Miantehitra tanteraka amin'ny fanangonana tsara ny famolavolana mba hahasarika azy kokoa.
Watercolor Tattoos misy fotony mainty
Ny tatoazy momba ny rano amin'ny fotony mainty dia drafitra amin'ny asa an-tsompitra sasany. Ny fanangonana dia vita avy amin'ireo asa an-tsoratra ireo. Ny asa an-tsoratra ny skeletal dia manome fiantraikany kokoa mifanohitra amin'ireo izay tsy misy fotony mainty. Ny ankamaroan'ny tatoazy dia mitazona fotsy mainty noho ny antony roa. Ny antony voalohany dia ny fahaiza-manaon'ny fototry ny mainty noho ny fahatsapana tsimoramora sy antony faharoa ny tsy fahampian'ny tatoazy tamin'ny famoahana tetikasa tsy misy sisintany mainty.
Tattoo designs popular Watercolor
Tapa- Ny tatoazy momba ny tavoahangin-dranomamy marevaka dia malaza indrindra amin'ny loko marevaka sy ny endriny. Ny tatoazy mahazatra indrindra dia avy amin'ny raozy, lotus, volom-borona, gera, tulips, voninkazo ary voninkazo. Ireo dia natao ho toy ny voninkazo tokana na amin'ny bunch manome azy fijery manintona.
Tatoazy an-tanety- Ny lolo no tena tsara satria ampiasaina amin'ny tatoazy vita amin'ny totozy rano satria manana loko marevaka marevaka izy ireo izay mikaroka tanteraka ny zavakanto. Ny tatoazy dia afaka mamolavola loko maro ary manamboatra loko miavaka.
Tattoos tavy watercolor- Tattoos ny ravin-kiran'ny ranon-tavoahangy dia manintona eo amin'ny vatan'ny mpitaingina satria mahafinaritra ny hatsaran-tarehy izay mandroso sy mahafinaritra. Ny fampifangaroana loko maromaro amin'ny sisim-baravarankely dia manome endrika azy voalohany.
Tapa-tavoahangy akoholahy Wolf- Tataon'ny tondra-drano antsoina hoe Wolf Water dia endrika malaza hafa tian'ny maro. Tsy toy ireo tatoazy ho an'ny tontolon'ny varatra, ny tatoazy momba ny varimbazaha dia afaka mamela ny vokatra azo avy amin'ny zavamiaina eo amin'ny famolavolana ny mason'ny mpijery.
Fitaovana fandroana akoholahy trondro- Tatoavin'ny trondro hafa dia tato ho an'ny tatoazy malaza satria manana kalitaon'ny rano izy. Ny fampisehoana ny tatoavin'ny trondro amin'ny rano misy vokany dia miharihary kokoa amin'ny fampiasana loko mamirapiratra sy tavy.
Hummingbird tattoos- Tattoos ny kôlôbôra dia zavatra tsara tarehy mamorona satria mamelatra ny elany amin'ny haingam-pandeha haingana, manome fiantraikany mavesatra ao amin'ny hetsika ary mora ny manao tato ho an'ny tavy watercolor.
Fomba hisorohana haingana ny tatoazy momba ny rano
Ny tatoazy momba ny rano dia mora kokoa amin'ny fampitahana ireo tatoazy nentim-paharazana. Ny fampiasana ny famafazana loko eo amin'ny tatoazy dia manampy amin'ny fahantrana amin'ny fiparitahana haingana. Mandoko tsikelikely ny tatoazy momba ny rano, rehefa azo antoka ny fikojakojana. Izany dia ahitana:
Fidio ny mpahaikanto havanana - Mpanakanto iray manana traikefa be dia be ao anatin'ity fomba fandraisana an-tsoratra ity dia hiantoka fa ny tatoazy dia vita amin'ny teknika izay manakana ny fikolokoloana haingana. Mifidiana mandrakariva ny tato-pahaizana momba ny tatoazy amin'ny alalan'ny fangatahana azy ireo hamolavola santionan'ny asa teo aloha. Ny tatoazy efa za-draharaha tsy dia za-draharaha dia tsy afaka manao tatoazy momba ny fandroana rano rehefa mandefa karazana sy artista sasany.
Atsaharo ny hazavan'ny masoandro - Ny fahazavan'ny masoandro dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tranainy sy ny tatoazy vaovao. Ny fitomboan'ny tatoazy amin'ny tara-masoandro dia hiteraka haingana kokoa. Ny fampiharana loko marevaka matevina amin'ny alàlan'ny fanakanana ny vokatry ny tara-masoandro amin'ny tatoazy dia tena atolotsaina. Ny fanafenana ny tatoazy amin'ny alalan'ny fitafy araka ny filalaovana dia hanampy koa amin'ny fisorohana ny fanimbana.
Arovy ny hoditra salama - Ny hatsaran'ny tatoazy dia mety maharitra ela rehefa salama tsara ny hoditra. Ny fihinanana sakafo mahavelona, ​​ny fivoahana tsara sy ny torimaso tsara dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana ny hafanana amin'ny tatoazy
Fehezina - Tena ilaina ny famonoana ny famonoan-tena mba hisorohana ny famoahana, ny fihenam-bidy sy ny fahafatesana amin'ny hoditra ary hitazona azy tsara. Ny fampiasana fofona maimaim-poana tsara ho an'ny hatsikana manimba ny hoditra dia hanampy amin'ny fanasitranana haingana ny tatoazy sy mba hisorohana ny fanimbana.
Prevent Rubbing - Ny tatoazy any amin'ireo faritra mora tratran'ny fanjonoana dia hiteraka haingana ny tatoazy. Manolo-kevitra ny tsy hampiditra tatoazy eo amin'ny tongotrao na ny rojo.
Ny tatoazy vita amin'ny rôbôly dia tsy misy drafitra tsara raha ampitahaina amin'ny tatoazy nentim-paharazana izay mitaky fikirizana sy loko mazava. Ny tatoazy momba ny rano dia manome ny mpanakanto fahafahana mamorona tetikasa tsy manam-paharoa amin'ny lokon'ny loko. Ny totozy momba ny rôbôlôgôra rehetra dia azo amboarina, ny tatoazy dia manana fahaizana matihanina amin'ny fanaovana tatoazy momba ny rano.
Tags:tatoazy ho an'ny zazavavy tattoos ho an'ny lehilahy tattoo watercolor
Tatoazy ara-jeometrikatanana tatoazytattoo watercolortatoazy ho an'ny zazavavyfitiavana tatoazytratra tatoazyloto voninkazotattoos mahafatifatytattoos backHeart Tattoostattoos armmasoandro tatoazycompass tattoomoon tattoostattoo octopuseagle tattoosdiamondra tattoorip tattoostattoo infinityAnkle Tattoostattoos ho an'ny lehilahyscorpion tattootato ho an'ny vatofantsikatattoos mpivadytattoosarrow tattoomehndi designTattoo Feathermozika tatoazytattoo eyetattoos sleevetattoo ideaslion tattoostatoazy voninkazotattoos voronacat tattoosanjely tattoostatoazy lolotattoos rahavavytattoos foothenna tattookoi fish tattootattoo cherry blossomNy zodiaka dia mampiseho tatoazytatoazy fokonamana tattoos tsara indrindraraozy tatoazytattoostattoos crosselefanta tatoazy